E Nyela Gọọmenti Ọstria Iwu Ka Ha Kwụọ Ndịàmà Jehova Ụgwọ Maka Imeso Ha Mmeso Ọjọọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
NỌVEMBA 1, 2012
AKỤKỌ a si Strasbọg dị na Frans. N’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Septemba afọ 2012, Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ na Yurop kwuru na gọọmenti Ọstria mesoro Ndịàmà Jehova mmeso na-adịghị mma. Ụlọikpe a nyekwara gọọmenti Ọstria iwu ka ha kwụọ Ndịàmà Jehova ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ $16,600 (ya bụ, ihe dị ka ₦2,573,000) maka ego ha mefuru n’ikpe ha na ha.
N’afọ 2002, e nwere Ndịàmà Jehova abụọ chọrọ ịbịa Ọstria bịa nyere ụmụnna ha na-asụ asụsụ Tigalọg aka ikwusa ozi ọma, ma gọọmenti Ọstria ekweghị ha bata. N’okwu ọzọ Ndịàmà Jehova na gọọmenti Ọstria nwere, ha nyere Ndịàmà Jehova iwu ka ha kwụọ ha ụtụ isi maka ego ndị ha nwetara n’onyinye n’afọ 1999. Ihe mere gọọmenti ji mee ihe ndị a bụ maka na ha ewereghị okpukpe Ndịàmà Jehova ka “okpukpe a ma ama” kama ha weere ya ka “obere okpukpe.” Ọ bụ ya mere na ha anaghị emeso Ndịàmà Jehova otú ha si emeso ndị okpukpe ndị ọzọ a ma ama.
Ikpe a bụ ikpe nke isii Ụlọikpe Yurop na-ekpelara Ndịàmà Jehova. O gosiri na ụlọikpe a ka kwụ ebe ha kwụ n’ikpe ha kpelaara Ndịàmà Jehova n’afọ 2008. N’ikpe afọ 2008 ahụ, ụlọikpe a kwuru na gọọmenti Ọstria “e kwesịghị igbu oge” tupu ha e were okpukpe Ndịàmà Jehova ka “okpukpe a ma ama” ebe ọ bụ na “ọ dịla anya ọ dịwara ná mba ndị ọzọ. Ọ dịkwala anya ọ dịwara” n’Ọstria.
Ndịàmà Jehova na-atụ anya na ikpe a Ụlọikpe Yurop kpelaara ha ga-eme ka ndị ọchịchị na-ekwe ha ka ha na-eme ihe ndị ruuru ha, na-emesokwa ha otú ha si emeso ndị okpukpe ọzọ. Ihe ndị a ga-abara ma Ndịàmà Jehova ma ndị niile nọ ná mba ndị so n’Òtù Na-ahụ Maka Udo na Yurop uru.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ E Nyela Gọọmenti Ọstria Iwu Ka Ha Kwụọ Ndịàmà Jehova Ụgwọ Maka Imeso Ha Mmeso Ọjọọ